सिपोरा गुरुङको मायामा डुब्दै अभिनेता रमेश बुढाथोकी – Halkaro
सिपोरा गुरुङको मायामा डुब्दै अभिनेता रमेश बुढाथोकी
काठमाडौँ । अभिनेता रमेश बुढाथोकी विस्तारै विस्तारै भलिवलर सिपोरा गुरुङको मायामा पर्दै गएका छन् । उनि आफ्नै छिमेकी सिपोरालाई विस्तारै मन पराउँन थाल्छन अनि उनले खोजे झैँ आफ्नो स्वरूपमा पनि परिवर्तन ल्याउन थाल्छन । तर यो घटना रियललाईफको नभई रिललाईफको हो । यी दुइको अभिनय रहेको फिल्म भुइँ मान्छेको सार्वजनिक गीतमा यस्तो देखिएको हो ।
प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र भूईँमान्छेको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा रमेश र सिपोरालाई फिचरीङ गरिएको छ । गीतमा उनीहरुबीच बढ्दै गरेको मायालाई देखाइएको छ । सार्वजनिक गीतमा शब्द दयाराम पाण्डेको रहेको छ भने यसमा संगीत अर्जुन पोखरेलले दिएका छन् । यस गीतलाई प्रमोद खरेलले गाएका छन् । गीतलाई कविराज गहतराजले निर्देशन गरेका छन् भने यसलाई बिदुर पाण्डेले खिचेका हुन् । फिल्म आउदो भाद्र २ मा रिलिज हुनेछ ।
शैली ईन्टरटेन्मेन्ट एण्ड मुभिज प्राली र शैली थिएटरको प्रस्तुती नेपाली चलचित्र भुँईमान्छे अस्पतालमा पोष्टमार्टम गर्ने मान्छेको कथा हो । दैनिक लाश चिर्ने मान्छेको जीवन कस्तो हुन्छ । उसलाई समाजले कसरी हेरेको हुन्छ । उसको मनोविज्ञान कस्तो होला ? यीनै कुराहरुलाई चलचित्रमा समेटिएको छ । त्यतिमात्र नभएर, आफ्नो भब्य घरमा एक्लै वस्दै आएकी एउटी युवती, किन एक्लै वस्दै आएकी हो त ? उसको जीवनमा के कस्ता आरोह अवरोह आईपर्छन त , भन्ने कुरा पनि चलचित्रमा हेर्न पाईन्छ । संगै चिकित्सा क्षेत्रका विकृतिहरुलाई पनि चलचित्रले छोएको छ ।
चलचित्रमा सिपोरा गुरुङ्ग, रमेश बुढाथोकी, सहिन प्रजापति, रोहणी भट्टराई,बादल भट्ट,रामबाबु रेग्मी,शसांक बोहोरा, आर्यान न्यौपाने , नारायण न्यौपाने , सानु ताम्राकार,सौरभ ढकाल ,हरि यादव आदिले अभिनय गर्नुभएको छ । यस्तै,विशेष भुमिकामा तारा केसी,पुष्कर गुरुङ्ग र नविन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
← संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा सरकार
फेरी सर्यो भरतपुर मतगणना काण्डको सुनुवार्इ →